Yaa Badalay Burjikadii Ceelbuur | Dayniile.com
Home Warkii Yaa Badalay Burjikadii Ceelbuur
Yaa Badalay Burjikadii Ceelbuur.
Dhamaan Saddaxdan nuuc ee Burjikada Laguma isticmaalo, Gaas iyo Koronto.
Magaalooyinka waaweyn iyoTuulooyinka aan weli Fursadda u helin in ey isticmaalaan Gaas ama Koronto, weli waxaa laga isticmaalaa Saddaxdaan Nuuc ee Burjikada ah.
1. Burjikada Ceelbuur oo laga sameeyo Dhagax dabeeci ah oo dhulka laga qodo, waxaa lagu isticmaalaa Deegaanada Somalidu ey degto iyo qaar ka mid ah Deegaanada la deriska ah. waa Nooca kaliya ee hadduu dilaaco aad si fudud u dayac tira karto. Qiimaheedu waa $5.
Haddii aad iibsato Burjikada Ceelbuur waxaad shaqo u abuurtay Farsamayaqaan Somali ah, waxaad fursad siisay Ganacsato somali ah oo goobo kala duwan u sii gudbiyo Burjikada. ( F.S:1aad)
2. waxaa Dalka la keenay Burjikooyin kale oo ka sameeysan Dhoob lagu dhax sameeyay Garac, lagana keenay Dalka kenya, waxa loo sameeyay iideh fara badan, Idaacad, TV iyo Boorar waaweyn oo Wadooyinka lagu dhajiyay. Waxa loo isticmaalaa intii Burjikada Ceelbuur loo isticmaali lahaa. Dadka Somalida oo badanaa jecel Badeecada Dibadda laga keeno ayaa iibsado. Qiimaha Tan yar waa $35 tan weynna waa $ 45. ( F.S: 2aad)
3. Farsama yaqaano Somaliya ayaa koobiyay Tii Kenya waxa ey sidii oo kale ka Sameeyeen Dhoobo iyo Gasac la mid ah tii la soo dhoofiyay, Qiimuhu waa $2.5. ( F.S: 3 & 4aad)
Sidaa oo ey tahay somalidu weli waxa ey daneynee wixii loo xayeesiiyo ama Dibadda laga keeno ee Qaal looga dhigo Sicirkooda, $ 2.5, $ 5, $ 35, $ 45 isku wada mid kala sicir.
Waxaa ila haboon in Burjikooyinka laga keeno dibadda lagu badiyo Cashuurta, iyo in Burjikada Ceelbuur aan la canshuurin, Farsama yaqaanadana Xirfadooda sare loo sii qaado, La xayeesiiyo loona dhoofiyo wadamada kale, iyo in Dhagaxa Ceelbuur laga sameeyo waxyaaba kale.
FG: Walaalaheyga ka ganacsado Burjikooyinka Dibadda laga keeno, Dalkana laga heli karo kuwa la Mid ah, yeeyna u qaadan in aan Ganacsigooda Ciladeeynayo, Tan Dalka Maal galiya, Xayeeysiin u Sameeya Dibaddana Suuq uga soo Raadiya.
Previous articleFanaanka Nimcaan Hilaac Xildhibaan Fiqi oo u jawaabay Xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun
Next articleArimaha dibada Turkiga oo cambaareysay goaanka Israel ugu fasaxday Yahuuda ku cibadeystaan Masjidka Barakeysan ee Qudus.
Warar dheeraad ah oo ka soo baxaya Xafiiska Raisal wasaare Rooble ayaa saxaafada u xaqiijiyay in shirkii xalay waqti danbe gaaray uu ku soo...